१६ लाख शेयर लगानीकर्ताको भविष्य अन्योलमा, बजार खोल्न किन मान्दैन बोर्ड ?
नेपालमा लकडाउन भएको ८३ दिनपछि बजार खुल्यो । लकडाउन नखोलिए पनि केही खुकुलो पार्दा ८३ दिनपछि खुलेको बजारमा भीडभाड निकै देखिन्छ । यसरी बजार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइरहँदा शेयर बजार भने अझै लकडाउनको त्रासमै धरमराइरहेको छ ।
लकाडाउन खुकुलो भइसक्दा पनि शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन)भने पटकपटक लकडाउनको कारण देखाएर कारोबार बन्द नै राख्ने सुरमा छ ।
गत ११ चैतदेखि बन्द भएको शेयर बजार ३० वैशाखदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ खोलिएको थियो । तर, शेयर निरन्तर ओरालो लागेर नेप्सेमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक हुँदा लगानीकर्ता आक्रोशित बनेका थिए । पछि लकडाउन नखोली शेयर बजार खोल्दा लगानीकर्ताका लगानी डुब्ने भन्दै बन्द गर्न दबाब आएसँगै शेयर कारोबार खुलेको २ दिनमा नै बन्द भयो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको दाबी गरिरहँदा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड भने अझै शेयर बजार खोल्न पूर्ण तयारी नभइसकेको कारण देखाउँदै बजार बन्द नै राख्ने सोचमा छ ।
किन खुल्दैन बजार ? के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?
शनिबार विज्ञप्ति नै लिकालेर शेयर बजार बन्द हुने जनाएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड भने बजार बन्द राख्नुको मुख्य कारण लकडाउनलाई मान्छ । तर, सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै एक हप्ताअगाडिदेखि नै बजार खुलिसकेको छ ।
सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न संघसंस्था पनि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले भने पुँजी बजारको कारोबारलाई पछाडि धकेल्दै आइरहेको छ ।
४९ दिनपछि सञ्चालन भएको पुँजी बजार २ दिनमा नै ४ प्रतिशत झरेको थियो । लामो समयदेखि सन्ताेषजनक नदेखिएकाे सेयर बजार परिसूचक नेप्से मंसिरयता उकालो लाग्दै थियाे ।
३ महिनाको अवधिमा सेयर सुधारिएर एकै दिन १ हजार ६ सय ६८ को विन्दुमा समेत पुगेको थियो र समग्रमा यो बर्ष १६ सय विन्दुमा पुगेको सेयर ४ सय अंकले फल भइसकेको छ ।
यसरी ओरालो लागेको सेयरमा लकडाउनको विच पून शेयर कारोबार खोलिदा घाटा हुने त्रासले पनि लगानीकर्ताले २ दिन खोलिएको बजारको विरोध गरेका थिए ।
त्यसैले लकडाउन विच २ दिनमा ४ प्रतिशतले घटेको सेयर कारोबार पून बन्द गरियो। त्यो समय लकडाउन पूर्णरूपमा कडा पारिएको थियो । कुनै संघसंस्था सञ्चालनमा थिएनन् भने स्टक ब्रोकर कम्पनी पनि ठप्प थियो ।
यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले करोबार गर्ने कुरै भएन । तर, अहिलेको अवस्था फेरिएको छ । जोर-बिजोर प्रणालीमा सवारी साधन निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छन् भने संघसंस्था पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा शेयर बढ्ने वातावरण आउला र खोलौँला भन्ने धितोपत्र बोर्डको रणनीति अशोभनीय देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
बजार बन्द गर्नेबारे धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना भने बजार खोल्ने वातावरण सिर्जना नै नभएको बताउँछन् । सरकार पुँजी बजार क्षेत्रतर्फ उदासीन रहँदा तथा पटकपटक सुधारका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले कुनै कदम नचाल्दा पुन: नेप्से खोल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘शेयर बजार पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको अवस्था छैन । यो वैशाख अन्तिमतिर २ दिन खोलिएको बजारको कारोबारलाई नै हेर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता नडुबून् भनेर बिहीबार नै धितो कर्जाको मार्जिन बढाउन र अनलाइन भुक्तानीको सीमा बढाउन गभर्नरलाई भेटेर माग गरेका थियौँ । तर, बैंकले यसतर्फ चासो नै देखाएन’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेप्से खोलेर लगानीकर्तालाई थप पीडित बनाउनुहुँदैन ।’
अध्यक्ष ढुंगानाले शेयर बजार सुधारका लागि गत बिहीबार धितो कर्जाको सीमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने र अनलाइन भुक्तानीको सीमालाई बढाउने माग पूरा गरेको खण्डमा तत्कालै पुँजी बजार खोलिने बताएका छन् ।
अहिले नेपालमा करिब १६ लाखको संख्यामा शेयर लगानीकर्ताहरू छन् भने ब्रोकर कार्यालयहरूसँग जोडिएका १ लाख ९९ हजार मात्र लगानीकर्ता छन् । करिब १४ लाख लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरविना नै शेयर कारोबार गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा बोर्डले लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यालयसम्म आउने अवस्था नरहेको भन्दै बजार बन्द गरिनु जायज नभएको शेयर बजार जानकारहरूको भनाइ छ ।
३ महिनासम्म शून्य सुधार
लगातार ३ महिनासम्म पुँजी बजार बन्द हुँदा नेप्सेसँग राम्रो अवसर थियो- शेयर बजारमा सुधार ल्याउनका लागि । ३ महिनासम्ममा शेयर बजारमा सुधार ल्याउनका लागि पहल कदमी चालिएन, न त यसमा धितोपत्र बोर्डले नै सुधारका निम्ति कुनै चासो राख्यो ।
अहिले आएर शेयर बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्ड तातेको छ । तर, धितोपत्र बोर्डले सुधार्न पहल नै ढिलो गर्दा ३ महिनाको समय बर्बाद भएको, जसका कारण बजार खुल्दासमेत पुँजी बजार खुल्न सक्ने अवस्था छैन ।
लगानीकर्ताको आक्रोश, के हेरेर बस्यो नेप्से ८६ दिन ?
लगानीकर्ता भने शेयर पटकपटक बन्द गरिनुमा नियामक निकायबीच आवश्यक समन्वय नहुनु नै मुख्य कारण भएको बताउँदै आएका छन् । लगानीकर्ता हरि ढकालले धितोपत्रले बजार सुधारेर मात्र खोलौँ भन्ने हेतुले काम गरिरहेको छ भने नेप्से शून्य सुधारको अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘३ महिनासम्म नेप्से के हेरेर बस्यो ? किन सुधारका कुनै कदम चालेन ? धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार सुधार्न चाहे पनि नेप्सेले कुनै चासो राखेको छैन, जसले गर्दा पुँजी बजार खोल्न सक्ने अवस्था सिर्जना नै भएन । यसमा सरासर नेप्सेको गल्ती छ ।’
ढकाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार सुधार्न ढिलो थाल्दा यो समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक सबै चुपचाप हुँदा बजार खोल्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै बजार बन्द राख्दा नै लगानीकर्ता सुरक्षित रहने बताउँछन् ।
त्यसो त अन्य लगानीकर्ताहरू पनि धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा पूर्ण सहमत छन् । ब्रोकर कार्यलयसम्म लगानीकर्ता आउन सक्दैनन्, त्यसैले बन्द गर्नुपर्ने ब्रोकरको धारणा छ । तर, १० प्रतिशत मात्र लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यालयसम्म आइपुग्छन् । तसर्थ, यो तर्क भने तार्किक देखिँदैन ।
यता, लगानीकर्ता नेप्से घट्छ भनेर बजार बन्द नै राख्न दबाब दिँदा सोहीअनुरूप बढ्ने देखिए मात्र खोल्ने धितोपत्र बोर्डको निर्णय पनि औचित्यहीन देखिन्छ । विश्व बजारमा जोखिमपूर्ण क्षेत्र भनेर नै पुँजी बजारलाई लिइन्छ । यस्तो अवस्थामा शेयर घट्छ भनेर कारोबार नै बन्द गरिनु कार्य नै गलत भएको शेयर बजारविज्ञको धारणा छ ।
नेप्से: खोल्न सकिन्छ, बोर्ड: सकिँदैन
बोर्डले नेप्सेले कारोबार खोल्न आवश्यक काम नगरेको भन्दै कारोबार खोल्न नहुने तर्क राखिरहँदा नेप्सेले भने आफूहरूले पुँजी बजार सञ्चालनका लागि सबै तयारी गरिसकेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, बजार खोल्नलाई समन्वय गर्ने निकायहरू आफैँ अलमलमा रहेका देखिन्छ ।
नेप्सेले यसअघि नै वैशाखमा शेयर बजार सुचारु गर्न सकिने भन्दै बोर्डमा सञ्चालनका लागि अनुमति पनि मागेको थियो, जसअनुरूप बजार खोलिए पनि कारोबार न्यून हुँदा बन्द भयो ।
लकडाउन खुकुलो भइसकेपश्चात् सामाजिक दूरी कायम गरेर लगानीकर्ताले शेयर किनबेच गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । लकडाउनपूर्व जसरी नै पुँजी बजार सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि बोर्डले पुँजी बजार खोल्न कुनै तरखर गरेको छैन बरु पटकपटक विभिन्न कारण देखाउँदै बजार बन्दै राख्नमा तल्लीन देखिएको छ ।
माग पूरा नभएसम्म बजार बन्द गर्ने निर्णय सही होइन
सेबोनले मागकै आधारमा शेयर बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको अभिव्यक्ति दिनु कदापि सही नभएको शेयर विश्लेषक विष्णु बस्याल बताउँछन् । बस्यालले सेबोनले यो ८७ दिनमा उल्लेख्य तयारी गरेर पुँजी बजारलाई चलायमान गरिसक्नुपर्ने भए पनि यसतर्फ कुनै कदम नचालेकामा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले भने, ‘पहिलो कुरो पुँजी बजार नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डले यो ८७ दिन के गर्‍यो ? किन कुनै तयारी गरेन पुँजी बजार सञ्चालन गर्न ? दोस्रो, बजार घट्छ भनेर लगानीकर्ताको दबाबमा बन्द राख्ने काम गरेको छ । यो नियमनकारी निकाय दबाबमा आउनु गलत हो र तेस्रो भनेको सामान्य २ बुँदे मागका आधारमा बजार नै बन्द गर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन, यो सरासर गलत हो ।’
लकडाउन हुनासाथ बजार सेटलमेन्ट, क्रेडिट रेटिङ लगायतका काममा सुधार गर्न बजार बन्द गर्दा दिइएको कारण सही भए पनि ८७ दिन बितिसक्दासमेत सोही कारण देखाउँदै अनिश्चितकालसम्म बजार बन्द गर्ने निर्णय बोर्डको लज्जास्पद निर्णय भएको विश्लेषक बस्यालको भनाइ छ ।
बोर्डको यो कदमले विश्व बजारमा नेपाली पुँजी बजारप्रतिको विश्वास घट्दै जाने हुँदा तत्काल पुँजी बजारलाई चलायमान गर्नुपर्ने शेयर बजार जानकारहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार ७, २०७७, ११:२२:००